WatchOS 7 beta 8 ayaa loo sii daayay horumariyaasha | Waxaan ka imid mac
Ugu dambayntii nooca beta ee soosocda ee watchOS 8 ayaa la gaaray oo ay la socdaan noocyada kala duwan ee macruufka iyo iPadOS ee soosaarayaasha. Xaaladdan, nooca beta ee soo socda ee horumariyaashas wuxuu ku darayaa xasilloonida iyo hagaajinta amniga ee nooca, ma jiraan wax isbeddel ah oo la taaban karo oo ku yimid hawlgalka nuqulkan cusub. Apple waxay sii wadaysaa abuurista noocyadan beta si ay u hesho nooca kama dambaysta ah sida ugu macquulsan laakiin waa run in betas hore aysan ka muuqan astaamaha xasillooni darrada ama wixii la mid ah.
Waxaa muhiim ah in la caddeeyo inay yihiin noocyada beta sidaas darteedna waxaa suurtogal ah in aaladda / codsiyada qaarkood aysan shaqayn karin ama aysan si habboon u shaqayn karin. Dareenkan, waxaa jira cabashooyin yar oo ka dhex jira adeegsadayaasha leh lagu rakibay noocyada beta ee dadweynaha laakiin tan waa in lagu xisaabtamaa.
Shakhsi ahaan, ma galayo adeegsiga noocyada beta ee ka baxsan kuwa loo sii daayay Mac, laakiin ikhtiyaarka ah inaan ku rakibo betaskan cusub wax badan bay i tijaabisaa sababtoo ah tirada astaamaha cusub ee lagu daray watchOS 8. Si kastaba ha ahaatee, dhammaan kuwii horeba ha ku rakibtay nuqulkii hore si fudud ayaa loo rabaa cusbooneysii doorbidyada Apple Watch adoo adeegsanaya OTA iyo voila, waxay horey uheli doonaan beta 7 oo lagu rakibay.
Waxa ay tahay inaan si cad u sheegno waa iyada oo leh noocyada beta ee Apple Watch, waa inaan aad u taxaddarnaa maadaama dhibaato ku jirta ay saacaddeena gebi ahaanba ka bixi karto adeegga. Waxa macquulka ah ayaa ah in tani aysan dhicin tan iyo markaas Waxaan la soconnay noocyada beta-ka dadweynaha muddo dheer xitaa saacadda oo waxay umuuqataa inay si fiican u shaqeyneyso, laakiin maskaxda ku hay in betas ay yihiin noocyo tijaabo ah oo aysan had iyo jeer ka shaqeyn karin 100% labadaba shaqadooda iyo codsiyada labadaba.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple Watch » WatchOS 7 beta 8 ayaa loo sii daayay horumariyeyaasha